Tsy misy fetra: i Russia dia manohy ny sidina feno miaraka amin'ny Repoblika Dominikanina, Repoblika Tseky ary Korea Atsimo
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Rosia » Tsy misy fetra: i Russia dia manohy ny sidina feno miaraka amin'ny Repoblika Dominikanina, Repoblika Tseky ary Korea Atsimo
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Momba ny Tseky • Vaovao Mafana Repoblika Dominikana • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Rosia • Safety • Vaovao farany momba ny Korea Atsimo • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Na eo aza ny fanafoanana ny fameperana rehetra, hatramin'izao dia mbola tsy nisy kaompaniam-pitaterana rosiana na vahiny nitatitra sidina fanampiny nosokafana avy tany Russia nankany amin'ireo firenena ireo.
Repoblika Dominikanina, Repoblika Tseky ary Korea atsimo no firenena telo voalohany, izay nanombohan'i Russia ny sidina feno.
Ny sidina mankany Prague dia tanterahin'i Rossiya avy any St. Petersburg, ary Aeroflot sy Czech Airlines avy any Moskoa.
Ny sidina mankany amin'ny Repoblika Dominikanina dia nosokafana tamin'ny volana Aogositra, ary ny sidina Azur Air ihany no mahavita sidina charter any.
Nanambara ny manampahefana rosiana misahana ny fiaramanidina sivily sy ny foiben'ny krizy anti-coronavirus fa nesorina nanomboka ny zoma 27 aogositra lasa teo ny fameperana misy ny sidina mankany amin'ny Repoblika Dominikanina, Korea Atsimo ary ny Repoblika Tseky.
Repoblika Dominikanina, Repoblika Tseky ary Korea atsimo no firenena telo voalohany, izay nanombohan'i Russia tanteraka ny sidina hatramin'ny nanombohana ny fameperana na dia teo aza ny areti-mandringana, miaraka amin'ireo firenena sisa tavela amin'ny rafitra fandaminana ny quota. Ankoatr'izay, nanapa-kevitra ny hampiakatra ny quota ho an'ny sidina mahazatra mankany Egypt manomboka ny zoma.
Hatramin'izao dia tsy mbola nisy mpitatitra fiaramanidina rosiana na vahiny nitatitra sidina fanampiny nosokafana ho an'ireo firenena ireo. Ny sidina mankany Prague dia tanterahin'i Rosia avy any St. Petersburg, ary Aeroflot ary Czech Airlines avy any Moskoa. Nikatona ho an'ny mpizahatany ny Repoblika Czech satria ny mpandeha ihany no manana zom-pirenena na fahazoan-dàlana hipetraka, na ireo tonga hianatra na hitsabo tena afaka miditra ao amin'ny firenena.
Nikatona tanteraka ihany koa i Korea Atsimo ho an'ny mpizahatany. Izay rehetra miditra amin'ny firenena (olom-pirenena na mpandeha manana fahazoan-dàlana hipetraka) ihany no takiana amin'ny karantina mandritra ny 14 andro. Ankoatr'izay, tamin'ny volana aprily lasa teo, nandao ny firenena ny fitsangatsanganana visa tsy misy visa miaraka amin'i Russia ary ny fampiatoana visa naato. Aeroflot ihany no manao sidina mankany amin'ny firenena.
Ny sidina mankany amin'ny Repoblika Dominikanina dia nosokafana tamin'ny volana Aogositra, ary ny sidina Azur Air ihany no mahavita sidina charter any. Aeroflot dia nanambara ihany koa ny fahalianany amin'ilay toerana alehany, na dia mbola tsy nanambara ny daty nanombohan'ny sidina aza ny orinasa.